आज नागपञ्चमी : यसरि गर्नुहोस् पुजा,बर्षभरी मिल्नेछ चमत्कारिक लाभ ! -
नागपञ्चमी पर्वलाई हिन्दु धर्म मान्नेहरुले विशेष महत्वको साथ लिने गर्दछन । यस दिन नाग देवताको पुजा गर्नाले सबै खालका दुःख र रोग ब्यथाहरु नष्ट भएर जान्छन
भन्ने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ । नागपंचमी आफैंमा एक महत्वपुर्ण पर्व हो यसको उपासना र पुजाले मानिसले शान्ति समृद्धिजस्ता कुराहरु सहजै प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास रही आएको छ । यो पटकको नागपंचमी सन १९८१ पछिको सबैभन्दा महत्वपुर्ण बन्ने ज्वतिषहरुले बताएका छन ।
१३ अगस्ट अर्थात भोलि बुधवार हस्त नक्षत्र साध्य योग एवम कन्या राशिमा चन्द्रमा रहने भएको छ । सूर्य, राहु, बुधको कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछ । यस दिन विशेष विधिको उपासना गरेर तपाईं सर्प दोषबाट
मुक्त हुन सक्नुहुनेछ।सबैभन्दा पहिले नाग पंचीको दिन, सर्पलाई तपाईले देवता को रूपमा पूजा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी हुनुपर्छ । यस दिन गरिने पुजा एक विशेष प्रकारको हुन्छ ।
पुजा गर्नुभन्दा पहिले बिहानै उठेर नुहाँउनुपर्छ अनी सुन, चाँदी अथवा तामाको नाग र नागिनको मुर्ति बनाउँनुपर्छ । मुर्ति बनाए पछि धुप,दिप नैवेद्य आदि बाट पंचोपचार वा पोडनशोपचारको उपासना गर्नुहोस् ।
यसरी पुजा गरिसके पछि सर्पको रुप धारण गरेका नाग नागिनलाई दूधले अभिषेक गर्नुपर्छ । अन्त्यमा पुजा गरे पछि नाग नागिनलाई कुनै पनि शिवलिगंमा चढाउनुपर्छ । यदि तपाई शिवपलर्गमा चढाउन सक्नुहुनन भने धातुबाट बनेको नाग
नागिनलाई कुनै नदीमा लिएर बगाउन पनि सक्नहुन्छ । यसैगरी हिजोआज कालसर्प योगको बारेमा धेरै चर्चा सुनिन्छ । कालसर्प योग भनेको के हो ? कालसर्प योगको निर्माण कसरी हुन्छ ? र यसको समाधान के हो त ?
अग्रे राहु पृष्टे केतुरन्तरश्च नवग्रहाः ।कालसर्प भवेत् योगो वंशनाशो भवेद् ध्रुवम् ।।ज्योतिष शास्त्रको यस प्रमाणले पनि कालसर्प योग यस्तै अवस्थालाई भनिन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
कालसर्प योगलाई ज्योतिषका सबै आचार्यहरुले भने स्विकारेका छैनन् । थोरै ज्योतिषका आचार्यहरुले भने यसलाई आफ्ना ज्योतिषिय ग्रन्थहरुमा स्विकारेको भेटिन्छ । ज्योतिष शाास्त्रमा यस्ता हजारौँ योगहरु
को वर्णन गरिएको पाइन्छ । राजयोग, महाराज योग, धनयोग, दरिद्र योग, मृत्यु योग, अल्पमृत्यु योग, रोग योग जस्ता योगहरु नाम अनुसार नै फल दिने गर्दछन् । कुण्डलीको १२ भावमा बसेका ग्रहहरुको आधारमा नै यस्तै विभिन्न योगहरु निर्माण हुने गर्दछन् ।
कालसर्प योग पनि कुण्डली हेरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । राहु र केतु ग्रहको एकातिर माात्र नै सबै ग्रहहरु भएको अवस्थालाई कालसर्प योग भनिन्छ । यस योगलाइ पुर्वजन्म का विविध दोषहरु पनि मान्ने गरिन्छ ।
पितृदोष , नागदोष आदि मानिन्छ । राहु र केतु को एकातर्फ मात्र नै सबै ग्रहहरु हुँदा यस्तो योग बन्ने भएकाले कुनै समयमा यो १५ दिन सम्म लगातार जन्मिने सबै मानिसहरुमा पर्न सक्ने देखिन्छ भने यो भन्दा बढी
अवधीमा पनि चन्द्रमा को अवस्थाका कारण आंशिक कालसर्प योग हुने गर्दछ । पृथ्वी नारायण शाहको पनि कुण्डलीमा कालसर्प योग भएको मानिन्छ उहाँको योगदानलाई कसैले विर्सुँ
भन्दा पनि नसिकिने नै छन् त्यसकारण कालसर्प योग पर्यो भन्दैमा डराउनु पर्ने भने देखिँदैन । यस योगलाई पनि भङ्ग गर्ने धेरै उपायहरु छन् । जस्तै केन्द्रमा कुनै ग्रह स्वगृही वा उच्चको भएर बसेको
अवस्थामा , चन्द्रमा र बृहस्पति सँगै भएको अवस्थामा पनि कालसर्प योग भंग हुने गर्दछ । यसका अलावा पनि यस योगको प्रभाव प्रभावहिन हुने निकै अवस्थाहरु हुने गर्दछन् । कालसर्प योगको प्रभाव आफ्नो
कुण्डलीमा कतिको छ भन्ने कुरा भने जान्ने ज्योतिषीलाई देखाएपछि मात्र थाहा हुने गर्दछ । यस योग भएका मानिसहरुले सपनामा पनि नाग तथा सर्पहरुलाई देख्ने गर्दछन् ।
कालसर्प योग भएका मानिसहरु निकै ठूला व्यक्ति बन्न सक्ने भएकाले यो योग पर्दैमा आत्तिनु भने पर्दैन । यसले जीवनमा चाहिँ निकै ठूलो संघर्ष दिने गर्छ ।
त्यसैले यसको शान्ति गर्दा यसको नराम्रो प्रभाव कम हुने शास्त्रको मान्यता रहेको छ ।यसको शान्तिको लागि विधान अनुसार रुद्रि, हवन र नाग पुजा गरि खोलामा लगेर नागलाई बगाउने गरिन्छ । यसरी शान्ति गर्दा यो दोष कम हुन्छ भन्ने विद्वानहरुको मान्यता रहेको छ ।
यो पटकको नागपंचमी सन १९८१ पछिको सबैभन्दा महत्वपुर्ण बन्ने ज्वतिषहरुले बताएका छन । १३ अगस्ट अर्थात भोलि बुधवार हस्त नक्षत्र साध्य योग एवम कन्या
राशिमा चन्द्रमा रहने भएको छ । सूर्य, राहु, बुधको कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछ । यस दिन विशेष विधिको उपासना गरेर तपाईं सर्प दोषबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ।सबैभन्दा पहिले नाग पंचीको दिन, सर्पलाई तपाईले देवता
को रूपमा पूजा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी हुनुपर्छ । यस दिन गरिने पुजा एक विशेष प्रकारको हुन्छ । पुजा गर्नुभन्दा पहिले बिहानै उठेर नुहाँउनुपर्छ अनी सुन, चाँदी अथवा तामाको नाग र नागिनको मुर्ति बनाउँनुपर्छ । मुर्ति बनाए पछि धुप,दिप नैवेद्य आदि बाट पंचोपचार वा
पोडनशोपचारको उपासना गर्नुहोस् । यसरी पुजा गरिसके पछि सर्पको रुप धारण गरेका नाग नागिनलाई दूधले अभिषेक गर्नुपर्छ । अन्त्यमा पुजा गरे पछि नाग नागिनलाई कुनै पनि शिवलिगंमा चढाउनुपर्छ । यदि तपाई शिवपलर्गमा चढाउन सक्नुहुनन भने धातुबाट बनेको नाग नागिनलाई कुनै नदीमा लिएर बगाउन पनि सक्नहुन्छ ।